Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Manambara tsiambaratelo ny vondrona IMEX
Nambara ny tsiambaratelo IMEX
Taorian'ny andrana nahomby tamin'ny volana lasa teo dia manasa ireo mpanatrika BuzzHub hanatevin-daharana ny "Gather Buzz Fest" ao amin'ny sehatra Gather.Town ny IMEX hanamarihana ny faran'ny andro fankalazana azy ho an'ny BuzzHub tamin'ny Alarobia 7 Jolay.
Ity no Gather Buzz Fest voalohany - ny andro IMEX Buzz aorian'ny fety.
Gather.Town dia sehatry ny lalao misy valiny mahery vaika mampatsiahy ny lalao arcade 80 an.
Misafidy avatar ny mpanatrika, misafidy akanjo iray, ary mivoaka mankamin'ny nomerika lehibe tsy fantatra amin'ny latabatr'izy ireo.
Ny Gather Buzz Fest an'ny IMEX dia manana efitrano filalaovana, tranolay fialamboly ho an'ny fahafinaretana amin'ny alàlan'ny heloka bevava, tobin'ny mozika, faritry ny valan-javaboary ary fitsangantsanganana amin'ny nosy tsy misy rano. Ny tompona alika dia asaina hitondra ny pookany tena izy eo amin'ny efijery ary ny mpitendry zavamaneno kosa afaka mihazona manodidina ny fatana. Tsy mila fanampiana, fampidinana na fampiharana no ilaina satria fehezina amin'ny alàlan'ny zana-tsipìka ny fitetezana.
Ireo mpandray anjara amin'ny hetsika Evolve Homecoming an'ny Swapcard dia hanatevin-daharana an'i Gather Buzz Fest ihany koa ho ampahany amin'ny hetsika iarahan'ireo vondrom-piarahamonina roa - voalohany ho an'ny indostria.
Nanazava i Carina Bauer: "Ao anatin'ny fanoloran-tenanay hanao andrana amin'ny anaran'ny indostria, niara-niasa tamin'i Gather.Town izahay mba hanomezana ny" singa miafina "isaky ny hetsika mivantana - ny fifandraisana tsy voavaha. Fantatray fa sarotra, raha tsy tsy azo atao, ny mamerina ny tsy fahombiazan'ny fidirana amin'ny namana indostrialy amin'ny tena fiainana, saingy io no akaiky indrindra hitanay ary manentana ny tsirairay izahay hanandrana izany. ”
The IMEX Gather Buzz Fest no fara-tampon'ny Andro Buzz iray hafa misy ireo mpandahateny sy fandaharana miorina amin'ny iray amin'ireo Fanoloran-tena 12 an'ny IMEX - Fanavaozana Extreme. Ireo mpandahateny dia misy an'i Christophe Debard, Head of Protospace, Toulouse; Talen'ny Creative teo aloha tao amin'ny magazine UK Grazia, Suzanne Sykes ary Light Artist, Frankie Boyle. Ny fandaharam-potoana anio dia ahafahan'ny vondrom-piarahamonina Evolve sy IMEX hiditra ao anatin'ny fotoam-pivoriana, ahitana mpandraharaha sy mpanoratra serial, Cris Beswick, momba ny 'Fananganana kolontsain'ny fanavaozana'.
Ny Gather Buzz Fest dia atao amin'ny faran'ny Andron'ny Buzz amin'ny 7 Jolay. Misoratra anarana amin'ny Buzz Day - maimaim-poana - Eto.
Ny IMEX BuzzHub dia mihazakazaka hatramin'ny volana septambra izay manome fifandraisana olona, ​​lanja ara-barotra ary atiny voafaritra ao amin'ny 'Road to Mandalay Bay' manomboka amin'ny IMEX America, 9 - 11 Novambra, ary ny Alatsinainy Smart, notarihan'ny MPI tamin'ny 8 Novambra.
# IMEX21 sy #IMEXbuzzhub
Brand USA mitazona an'i India amin'ny radarany virtoaly
Lahatsary Seychelles manaitra hahasarika ireo mpitsidika avy ...
Manatsara ny voka-dratsin'ny COVID-19 amin'ny fizahan-tany ...